Chronic Fatigue Syndrome (နာတာရှည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု) - Dr.PhyoMaungMaung
Chronic Fatigue Syndrome (နာတာရှည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု)
Chronic ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က အချိန်အကြာကြီးကို ဆိုလိုတာပါ။Fatigue ဆိုတာ မောပန်းနွမ်းနယ်မှု။Syndrome က ရောဂါအစုအဝေးလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ Chronic Fatigue Syndrome ဆိုတာနာတာရှည်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီး ခြောက်လအထက် အလွန်အမင်း မောပန်းနွမ်းနယ်နေတာပါ။ရောဂါရှာလျှင် မတွေ့တတ်ပါ။ဓာတ်ခွဲခန်း အဖြေတွေကလည်း ကောင်းနေလေ့ရှိပါတယ်။ နာတာရှည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ဖြစ်နေပြီလို့ နာမည်တပ်ဖို့ ဆရာဝန်တွေ အတွက်တောင်အတော်ခက်ပါတယ်။သက်လုံမကောင်းတော့ဘူး။မှတ်ဉာဏ်တွေလျော့နေပြီ။အာရုံစိုက်လို့ မရတော့ဘူး။အချိန်အကြာကြီးမလုပ်နိုင်မကိုင်နိုင် ပင်ပန်းနေပြီ။စိတ်ဓာတ်လည်းကျနေပြီဆိုတာ နာတာရှည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ရောဂါစုရဲ့လက္ခဏာတွေပါ။
ဖျားနာပြီဆို သိပ်မကြာဘူးပျောက်သွားတတ်ပေမယ့် နာတာရှည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) က တစ်ချိန်လုံးဖျားနေသလို ခံစားနေရတတ်တယ်။တစ်ခါတစ်ရံ အောက်မှာရေးပေးထားတဲ့ ရောဂါတွေလည်း ဖြစ်တတ်တယ်။
နာတာရှည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကို အခုထိရှာမတွေ့သေးပါ။ဟိုမုန်း မူမမှန်မှု၊ကိုယ်ခံအားစနစ် မပြည့်စုံမှု၊ဗိုင်းရပ်ပိုးကူးစက်ခံရခြင်း၊နာတာရှည်သွေးအားနည်းနေခြင်း နှင့် အစာအဟာရမပြည့်စုံခြင်းတို့ဟာ နာတာရှည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ရောဂါကိုပိုဆိုးစေသော အကြောင်းတွေပါ။တစ်ချို့ရေးတာက oxidative stress, Celiac disease, အစာနှင့် ဓာတ်မတည့်မှုတွေနဲ့ အဆက်အစပ်ရှိတယ်ဆိုပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်တွေကလည်း နာတာရှည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုပါတယ်။
နာတာရှည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ကို ဆေးရုံတွေမှာတော့ ရောဂါဇစ်မြစ်ကိုရှာလို့မရတာမို့ ဖြစ်လာတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာကိုပဲ သက်သာအောင် ကုပါတယ်။စိတ်ရောဂါနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆေးတွေပေးမည်။အိပ်ဆေးတွေပေးမည်။ကုရတာလည်း သိပ်ကြာတာမို့ ဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်း ဖြစ်လာပါတယ်။
အနောက်တိုင်း Functional medicine မှာ အကြံပြုတာက ဗိုက်တာမင် B အုပ်စု၊ပိုတက်ဆီယမ်များတဲ့အစာ၊မက်ဂနီဆီယမ်တွေ ပိုစားခိုင်းပါတယ်။ Alternative and Complementary Medicine ဂျာနယ်အဆိုအရ အပ်စိုက်ကုခြင်း၊တရားထိုင်ခြင်းတို့က နာတာရှည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ကိုသက်သာစေတယ်ရေးပါတယ်။
အခုရေးပေးမည့် ကုသနတွက functional medicine စာအုပ်က ယူရေးတာပါ။
၁။ အစာနဲ့ ဓာတ်မတည့်တာနဲ့ နာတာရှည် နွမ်းနယ်နေမှု တို့က အဆက်အစပ်ရှိတယ်လို့ ပြောတဲ့ သုသေတနတွေ သိပ်များလာပါတယ်Scandinavian Journal of Gastroenterology မှာရေးတာက IBS(အူလမ်းကြောင်းမူမမှန် လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဖြစ်သောရောဂါ),fibromyalgia (နာတာရှည် ကြွက်သားနာကျင်တောင့်တင်းသောရောဂါ) ,နာတာရှည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) တို့က အဆက်အစပ်ရှိနေတာတွေရတဲ့အခါ ဆရာဝန်ကြီးတော်တော်များများ အံ့သြသွားတာတော့ အမှန်ပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ အစာမကြေခြင်း နှင့် အစာနဲ့ ဓာတ်မတည့်တာဟာ အဓိက အကြောင်းဖြစ်နိ်ုင်တယ်လို့ သူတို့ကောက်ချက်ချပါတယ်။ ဂလူတန်နဲ့ မတည့်တာ၊ နို့ နဲ့မတည့်တာအပြင် ပဲ နဲ့တစေး တို့ဖြင့်လည်း ဓာတ်မတည့်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဘာနဲ့ မတည့်ဘူးလဲဆိုတာ ငွေကြေးတတ်နိုင်လျှင် IgG (Immunoglobulin G) စစ်ဆေးမှုလုပ်သင့်တယ်။မတည့်တာကို ရှောင်လိုက်လျှင် IBS, ADHD, အဆစ်ရောင်ခြင်း နှင့် chronic fatigue syndrome တို့သက်သာသွားပါတယ်။Ig G စစ်ရင်း Candida albicans test လုပ်ကြည့်တာပိုကောင်းပါတယ်။
Orthomolecular Medicine ဂျာနယ်အဆိုအရ ပရိုဘိုင်အိုတစ် အများကြီးပါတဲ့ ကီဖာ၊ဒိန်ချဉ်၊နဲ့ ကင်ချီတွေကျွေးလိုက်လျှင် သက်သာသွားပါတယ်။မစစ်နိုင်လျှင်တောင် ဒီအစာတွေက စားသင့်ပါတယ်။ဟင်းရွက် စိမ်းစိမ်းတွေ၊နှမ်းကြပ်စေ့တွေ နဲ့ ချီးယားစေ့တွေလည်း စားပေးဖို့ လိုပါတယ်။
ရှောင်ရမဲ့အစာတွေက candida မှိုတွေကြိုက်တဲ့ သကြား၊အသီးချို၊အရက် နဲ့ ပြောင်းဖူးလို အစေ့အဆန်ပါ။candida မှိုကို မကုလျှင် leaky gut ရလာနိုင်ပါတယ်။H. pylori က ဘက်တီးရီးတစ်မျိုးပါ။ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့၂/၃ လောက်မှာ ရှိပါတယ်။ထိုပိုးက အစာအိမ်နံရံကို ဖျက်စီးတတ်တယ်၊မကုပဲထားလျှင် အစာအိမ်အနာဖြစ်တတ်တယ်။ထိုပိုးကလည်း နာတာရှည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။
၂။ ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုတွေဖြစ်တဲ့ B1,B12,B 6,B 2,folate နဲ့ နာတာရှည်နွမ်းနယ်မှု တိုက်ရိုက်ပတ်သတ်နေတယ်လို့ တော်ဝင်ဆေးပညာအဖွဲရဲ့ ဂျာနယ်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဗိုက်တာမင် B-6 က မောပန်းမှုကို မဖြစ်အောင်ကာကွယ်တယ်။ဖြစ်ပြီးလျှင်လည်း သက်သာပျောက်ကင်းစေတယ်။သွေးဖြူဥတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ T cell ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပြီး ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ပေးတယ်။နာတာရှည် နွမ်းနယ်တတ်သူတွေ ဗိုက်တာမင် B-6 ကြွယ်ဝတဲ့ ဆာလမွန်ငါး၊တူနာငါး၊ဌက်ပျောသီး၊အမဲသား၊ကန်စွန်းဥ၊ကြက်သွန်ဖြူ၊ဟင်းနုနွယ်တွေ များများစားပေးရမည်။တစ်လလောက်ဆို သိသာပါတယ်။
သူတို့နောက်ထပ်ညွှန်းတဲ့ ဗိုက်တာမင်တွေက folate နဲ့ B 12 ပါ။ဗိုက်တာမင် B6, folate, B12 သုံးခုပေါင်းပြီး မီသိုင်းလေးရှင်း (Methylation) ဆိုတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ဆောင်ရွက်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ခုခံအား၊စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၊စိတ်အခြေအနေ၊အာရုံကြောကျန်းမာရေး၊ကိုယ်တွင်းသန့်စင်ခြင်း တို့ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေတယ်။နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေတဲ့ မယ်လတိုနင် ဟိုမုန်းထုတ်လုပ်မှုလည်း တိုးတက်စေတယ်။
Methylation ကောင်းကောင်းမဖြစ်လျှင် နာတာရှည် နွမ်းနယ်ပင်ပန်း နေတတ်တဲ့အပြင် နာတာရှည်ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာ၊ဆီးချို၊နှလုံးရောဂါ၊ဓာတ်မတည့်ခြင်းများနဲ့ စိတ်ရောဂါတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဗိုက်တာမင် B-12 ပါတဲ့အစာတွေက အမဲသား၊တူနာ၊ဆာဒင်း၊ချိစ်၊ဥအမျိုးမျိုးတွေပါ။supplement အနေနဲ့ဆို meth B12 လို့ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေ အတိုခေါ်တဲ့ methylcobalamin ဝယ်သောက်ပါ။
၃။ ပိုတက်ဆီယမ် နဲ့ မက်ဂနီဆီယမ်က နာတာရှည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ကို သက်သာစေပါတယ်။သုသေတနတွေမှာတွေ့တာက မက်ဂနီဆီယမ်များတဲ့အစာကို ခြောက်ပတ်လောက်စားပေးလျှင် နာတာရှည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ကို သက်သာစေတယ်ဆိုပါတယ်။မက်ဂနီဆီယမ် ကြွယ်ဝတဲ့အစာတွေက ဟင်းနုနွယ်၊ဖရုံစေ့၊ကီဖာ၊ထောပတ်သီး၊ဌက်ပျောသီးတွေပါ။ပိုတက်ဆီယမ် က ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ဓာတ်သတ္ထုတွေကို မှန်ကန်စေပါတယ်။ပိုတက်ဆီယမ်များတဲ့ အစာတွေ စားပေးလျှင် နာတာရှည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ကို သက်သာစေတယ်။
၄။ နာတာရှည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ဟာ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ပင်ပန်းတာကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ဒါကြောင်း အနားယူပါ။အနားယူတယ်ဆိုတာ အိပ်တာထက်ပိုပါတယ်။အကောင်းဆုံး အကြံပေးလိုတာက တစ်ပတ် တစ်ရက် ဘာမှ မလုပ်ပဲနားပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ အိပ်ပါ။ ယောဂကျင့်ပါ။ ဆီဖြင့် အနှိပ်ခံပါ။ တရားထိုင်ပါ။
ဒီလေးချက်ကို သေချာလုပ်လျှင် တစ်လလောက်အတွင်း နာတာရှည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။
နာတာရှညျ ပငျပနျးနှမျးနယျမှု ရောဂါစု( Chronic Fatigue Syndrome )
Chronic ရဲ့ အဓိပ်ပာယျက အခြိနျအကွာကွီးကို ဆိုလိုတာပါ။Fatigue ဆိုတာ မောပနျးနှမျးနယျမှု။Syndrome က ရောဂါအစုအဝေးလို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။ Chronic Fatigue Syndrome ဆိုတာနာတာရှညျရောဂါတဈခုဖွဈပွီး ခွောကျလအထကျ အလှနျအမငျး မောပနျးနှမျးနယျနတောပါ။ရောဂါရှာလြှငျ မတှတေ့တျပါ။ဓာတျခှဲခနျး အဖွတှေကေလညျး ကောငျးနလေရှေိ့ပါတယျ။ နာတာရှညျ ပငျပနျးနှမျးနယျမှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ဖွဈနပွေီလို့ နာမညျတပျဖို့ ဆရာဝနျတှေ အတှကျတောငျအတျောခကျပါတယျ။သကျလုံမကောငျးတော့ဘူး။မှတျဉာဏျတှလြေော့နပွေီ။အာရုံစိုကျလို့ မရတော့ဘူး။အခြိနျအကွာကွီးမလုပျနိုငျမကိုငျနိုငျ ပငျပနျးနပွေီ။စိတျဓာတျလညျးကနြပွေီဆိုတာ နာတာရှညျ ပငျပနျးနှမျးနယျမှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ရောဂါစုရဲ့လက်ခဏာတှပေါ။
ဖြားနာပွီဆို သိပျမကွာဘူးပြောကျသှားတတျပမေယျ့ နာတာရှညျ ပငျပနျးနှမျးနယျမှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) က တဈခြိနျလုံးဖြားနသေလို ခံစားနရေတတျတယျ။တဈခါတဈရံ အောကျမှာရေးပေးထားတဲ့ ရောဂါတှလေညျး ဖွဈတတျတယျ။
နာတာရှညျ ပငျပနျးနှမျးနယျမှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ဘာလို့ဖွဈလဲဆိုတဲ့ အကွောငျးကို အခုထိရှာမတှသေ့ေးပါ။ဟိုမုနျး မူမမှနျမှု၊ကိုယျခံအားစနဈ မပွညျ့စုံမှု၊ဗိုငျးရပျပိုးကူးစကျခံရခွငျး၊နာတာရှညျသှေးအားနညျးနခွေငျး နှငျ့ အစာအဟာရမပွညျ့စုံခွငျးတို့ဟာ နာတာရှညျ ပငျပနျးနှမျးနယျမှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ရောဂါကိုပိုဆိုးစသေော အကွောငျးတှပေါ။တဈခြို့ရေးတာက oxidative stress, Celiac disease, အစာနှငျ့ ဓာတျမတညျ့မှုတှနေဲ့ အဆကျအစပျရှိတယျဆိုပါတယျ။ ဗိုငျးရပျတှကေလညျး နာတာရှညျ ပငျပနျးနှမျးနယျမှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ကိုဖွဈစတေယျဆိုပါတယျ။
နာတာရှညျ ပငျပနျးနှမျးနယျမှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ကို ဆေးရုံတှမှောတော့ ရောဂါဇဈမွဈကိုရှာလို့မရတာမို့ ဖွဈလာတဲ့ ရောဂါလက်ခဏာကိုပဲ သကျသာအောငျ ကုပါတယျ။စိတျရောဂါနဲ့ဆိုငျတဲ့ ဆေးတှပေေးမညျ။အိပျဆေးတှပေေးမညျ။ကုရတာလညျး သိပျကွာတာမို့ ဆေးရဲ့ဘေးထှကျဆိုးကြိုးလညျး ဖွဈလာပါတယျ။
အနောကျတိုငျး Functional medicine မှာ အကွံပွုတာက ဗိုကျတာမငျ B အုပျစု၊ပိုတကျဆီယမျမြားတဲ့အစာ၊မကျဂနီဆီယမျတှေ ပိုစားခိုငျးပါတယျ။ Alternative and Complementary Medicine ဂြာနယျအဆိုအရ အပျစိုကျကုခွငျး၊တရားထိုငျခွငျးတို့က နာတာရှညျ ပငျပနျးနှမျးနယျမှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ကိုသကျသာစတေယျရေးပါတယျ။
အခုရေးပေးမညျ့ ကုသနတှက functional medicine စာအုပျက ယူရေးတာပါ။
၁။ အစာနဲ့ ဓာတျမတညျ့တာနဲ့ နာတာရှညျ နှမျးနယျနမှေု တို့က အဆကျအစပျရှိတယျလို့ ပွောတဲ့ သုသတေနတှေ သိပျမြားလာပါတယျScandinavian Journal of Gastroenterology မှာရေးတာက IBS(အူလမျးကွောငျးမူမမှနျ လှုပျရှားမှုကွောငျ့ ဖွဈသောရောဂါ),fibromyalgia (နာတာရှညျ ကွှကျသားနာကငျြတောငျ့တငျးသောရောဂါ) ,နာတာရှညျ ပငျပနျးနှမျးနယျမှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) တို့က အဆကျအစပျရှိနတောတှရေတဲ့အခါ ဆရာဝနျကွီးတျောတျောမြားမြား အံ့သွသှားတာတော့ အမှနျပဲလို့ ဆိုပါတယျ။ အစာမကွခွေငျး နှငျ့ အစာနဲ့ ဓာတျမတညျ့တာဟာ အဓိက အကွောငျးဖွဈနျိုငျတယျလို့ သူတို့ကောကျခကျြခပြါတယျ။ ဂလူတနျနဲ့ မတညျ့တာ၊ နို့ နဲ့မတညျ့တာအပွငျ ပဲ နဲ့တစေး တို့ဖွငျ့လညျး ဓာတျမတညျ့တာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။
ဘာနဲ့ မတညျ့ဘူးလဲဆိုတာ ငှကွေေးတတျနိုငျလြှငျ IgG (Immunoglobulin G) စဈဆေးမှုလုပျသငျ့တယျ။မတညျ့တာကို ရှောငျလိုကျလြှငျ IBS, ADHD, အဆဈရောငျခွငျး နှငျ့ chronic fatigue syndrome တို့သကျသာသှားပါတယျ။Ig G စဈရငျး Candida albicans test လုပျကွညျ့တာပိုကောငျးပါတယျ။
Orthomolecular Medicine ဂြာနယျအဆိုအရ ပရိုဘိုငျအိုတဈ အမြားကွီးပါတဲ့ ကီဖာ၊ဒိနျခဉျြ၊နဲ့ ကငျခြီတှကြှေေးလိုကျလြှငျ သကျသာသှားပါတယျ။မစဈနိုငျလြှငျတောငျ ဒီအစာတှကေ စားသငျ့ပါတယျ။ဟငျးရှကျ စိမျးစိမျးတှေ၊နှမျးကွပျစတှေ့ေ နဲ့ ခြီးယားစတှေ့လေညျး စားပေးဖို့ လိုပါတယျ။
ရှောငျရမဲ့အစာတှကေ candida မှိုတှကွေိုကျတဲ့ သကွား၊အသီးခြို၊အရကျ နဲ့ ပွောငျးဖူးလို အစအေ့ဆနျပါ။candida မှိုကို မကုလြှငျ leaky gut ရလာနိုငျပါတယျ။H. pylori က ဘကျတီးရီးတဈမြိုးပါ။ကမ္ဘာ့လူဦးရရေဲ့၂/၃ လောကျမှာ ရှိပါတယျ။ထိုပိုးက အစာအိမျနံရံကို ဖကျြစီးတတျတယျ၊မကုပဲထားလြှငျ အစာအိမျအနာဖွဈတတျတယျ။ထိုပိုးကလညျး နာတာရှညျ ပငျပနျးနှမျးနယျမှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) နဲ့ ဆကျစပျနပေါတယျ။
၂။ ဗိုကျတာမငျ B အုပျစုတှဖွေဈတဲ့ B1,B12,B 6,B 2,folate နဲ့ နာတာရှညျနှမျးနယျမှု တိုကျရိုကျပတျသတျနတေယျလို့ တျောဝငျဆေးပညာအဖှဲရဲ့ ဂြာနယျမှာရေးသားဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ ဗိုကျတာမငျ B-6 က မောပနျးမှုကို မဖွဈအောငျကာကှယျတယျ။ဖွဈပွီးလြှငျလညျး သကျသာပြောကျကငျးစတေယျ။သှေးဖွူဥတဈမြိုးဖွဈတဲ့ T cell ရဲ့ကနျြးမာရေးကို ကောငျးမှနျစပွေီး ဗိုငျးရပျကူးစကျမှုကို ကာကှယျပေးတယျ။နာတာရှညျ နှမျးနယျတတျသူတှေ ဗိုကျတာမငျ B-6 ကွှယျဝတဲ့ ဆာလမှနျငါး၊တူနာငါး၊ဌကျပြောသီး၊အမဲသား၊ကနျစှနျးဥ၊ကွကျသှနျဖွူ၊ဟငျးနုနှယျတှေ မြားမြားစားပေးရမညျ။တဈလလောကျဆို သိသာပါတယျ။
သူတို့နောကျထပျညှနျးတဲ့ ဗိုကျတာမငျတှကေ folate နဲ့ B 12 ပါ။ဗိုကျတာမငျ B6, folate, B12 သုံးခုပေါငျးပွီး မီသိုငျးလေးရှငျး (Methylation) ဆိုတဲ့ ဖွဈစဉျကို ဆောငျရှကျပွီး ကိုယျခန်ဓာရဲ့ ခုခံအား၊စှမျးအငျထုတျလုပျမှု၊စိတျအခွအေနေ၊အာရုံကွောကနျြးမာရေး၊ကိုယျတှငျးသနျ့စငျခွငျး တို့ကိုတိုးတကျကောငျးမှနျစတေယျ။နှဈခွိုကျစှာ အိပျပြျောစတေဲ့ မယျလတိုနငျ ဟိုမုနျးထုတျလုပျမှုလညျး တိုးတကျစတေယျ။
Methylation ကောငျးကောငျးမဖွဈလြှငျ နာတာရှညျ နှမျးနယျပငျပနျး နတေတျတဲ့အပွငျ နာတာရှညျရောဂါတှဖွေဈတဲ့ ကငျဆာ၊ဆီးခြို၊နှလုံးရောဂါ၊ဓာတျမတညျ့ခွငျးမြားနဲ့ စိတျရောဂါတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ ဗိုကျတာမငျ B-12 ပါတဲ့အစာတှကေ အမဲသား၊တူနာ၊ဆာဒငျး၊ခြိဈ၊ဥအမြိုးမြိုးတှပေါ။supplement အနနေဲ့ဆို meth B12 လို့ ကြှနျတျောသူငယျခငျြးတှေ အတိုချေါတဲ့ methylcobalamin ဝယျသောကျပါ။
၃။ ပိုတကျဆီယမျ နဲ့ မကျဂနီဆီယမျက နာတာရှညျ ပငျပနျးနှမျးနယျမှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ကို သကျသာစပေါတယျ။သုသတေနတှမှောတှတေ့ာက မကျဂနီဆီယမျမြားတဲ့အစာကို ခွောကျပတျလောကျစားပေးလြှငျ နာတာရှညျ ပငျပနျးနှမျးနယျမှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ကို သကျသာစတေယျဆိုပါတယျ။မကျဂနီဆီယမျ ကွှယျဝတဲ့အစာတှကေ ဟငျးနုနှယျ၊ဖရုံစေ့၊ကီဖာ၊ထောပတျသီး၊ဌကျပြောသီးတှပေါ။ပိုတကျဆီယမျ က ကိုယျခန်ဓာရဲ့ ဓာတျသတ်ထုတှကေို မှနျကနျစပေါတယျ။ပိုတကျဆီယမျမြားတဲ့ အစာတှေ စားပေးလြှငျ နာတာရှညျ ပငျပနျးနှမျးနယျမှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ကို သကျသာစတေယျ။
၄။ နာတာရှညျ ပငျပနျးနှမျးနယျမှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) ဟာ စိတျရော ကိုယျပါ ပငျပနျးတာကွောငျ့ဖွဈတာပါ။ဒါကွောငျး အနားယူပါ။အနားယူတယျဆိုတာ အိပျတာထကျပိုပါတယျ။အကောငျးဆုံး အကွံပေးလိုတာက တဈပတျ တဈရကျ ဘာမှ မလုပျပဲနားပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပါ။ အိပျပါ။ ယောဂကငျြ့ပါ။ ဆီဖွငျ့ အနှိပျခံပါ။ တရားထိုငျပါ။
ဒီလေးခကျြကို သခြောလုပျလြှငျ တဈလလောကျအတှငျး နာတာရှညျ ပငျပနျးနှမျးနယျမှု ရောဂါစု ( Chronic Fatigue Syndrome ) သကျသာသှားတတျပါတယျ။
One thought on “Chronic Fatigue Syndrome (နာတာရှည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု)”
LIN GUILLAUME says:
ဆရာအကောင်းဆုံးအကြံပေးချက်၆ချက်ထဲမှ ၂.၃.၄.၆ ကိုကြိုးစားလိုက်နာလေ့ကျင်ယူပါမယ်